India, ilay firenena tsara tarehy sy mahavariana feno fahagagana, ary ny firaisan-kina amin'ny fahasamihafana dia manolotra anao ny tena sarin'ity firenena tsara tarehy ity. Manana zavatra ho an'ny rehetra ny firenena. Na izany aza, ny mpizahatany rehetra mitsidika an'i India ary manana fotoana fohy dia maniry hatrany ny hijery ireo toerana sy toerana malaza indrindra.
Raha tena te-hijery an'i India ianao ary tsy manana an'io andro io dia alao ny tenanao a Kitapo fitsangantsanganana Triangle Golden izay ahitana ireo toerana manintona sy malaza indrindra toa an'i Delhi, Jaipur ary Agra. Afaka mahita fonosana Tour Triangle Golden mora azo 5 na 6 andro ianao.
Delhi – Toerana voalohany amin'ny Tour Triangle Golden, India
I Delhi no renivohitra ary reharehan'ny fizahan-tany any India. Fantatra amin'ny zava-mahatalanjona amin'ny rafitrano, ny tantara ary ny ankehitriny. Ity no toerana voalohany eto India izay samy manana seranam-piaramanidina iraisam-pirenena no koa misy seranam-piaramanidina anatiny. Ny sasany amin'ireo toerana tsy maintsy tsidihina any Delhi dia ny Fort Red, Fasan'i Humayun, Qutub-Minar, Temple Akshardham, vavahady India, ary maro hafa. Ankoatra ny toeram-pizahantany, fantatra ihany koa io toerana io noho ny departemantam-panjakana, institiota fanabeazana, sakafo ary fivarotana.
Agra - Tanàna Mughal any India
Talohan'izay dia Agra no renivohitry ny Emperora Mughal Akbar. Ny sasany amin'ireo toerana voatokana ho amin'ny tsipelina izay ho hitanao ao Agra dia Taj Mahal, Fort Fort Agra, ary Fasan'i Akbar, Et-Mad-Ud-Daulah, Sikandra, Jama Masjid ary ny sasany hafa. Rehefa avy any Agra mankany Jaipur ianao dia sendra an'i Fatehpur Sikri. Jereo ny lanjan'ny fivavahany ary fantaro ny lanjany ara-tantara. Ary koa, rehefa mitsidika an'i Taj Mahal ianao, dia afaka mahita ao anatin'ny Taj Mahal fa misy tranobe marobe vita tsara vita amin'ny endrika maritrano Mughal.
Jaipur - Ilay tanàna mavokely sy andry fahatelo amin'ny fitsangatsanganana telozoro volamena, India
Ny renivohitra Rajasthan, Jaipur dia reharehan'ny fizahan-tany an'ny fanjakana. Feno zava-mahatalanjona amin'ny maritrano sy toerana itodiana ara-tantara io toerana io. Ilay tanàna tsara tarehy dia antsoina hoe Pink City. Ny sasany amin'ireo toerana mahafinaritra ho hitanao eto dia ny Amber Palace, Jaisingh Palace, Hawa Mahal, Jantar Mantar, Birla Temple, ary ireo toerana hafa. Fantatra amin'ny trano tsara tarehy sy tsena taloha ny tanàna.
Ny fonosana fitsangantsanganana Golden Triangle dia mandrakotra ireo toerana rehetra voalaza etsy ambony ireo ary namboarina mba hahaliana ny mpizahatany rehetra. Fonosana fitsangantsanganana Golden Triangle mahaliana no atolotra hanatontosana ny toerana itodiana ny faritra manodidina. Ny toerana rehetra amin'ny fitsangatsanganana dia tsara tarehy ary hankafizinao ny fahatsiarovana azy ireo mandritra ny androm-piainanao. Azonao atao ny mamandrika ireo fonosana na aiza na aiza eto India
Ananao ny safidy, safidio ny tsara indrindra sy ny ekonomika indrindra ary Fonosana fitsangantsanganana lafo vidy miaraka amin'ny India Holiday Mall. Ny fonosana fitsangantsanganana Golden Triangle izay noforonin'izy ireo dia manarona ireo toerana telo rehetra ary amin'ny ankamaroany dia amin'ny andro 5-7. Raha tianao dia azonao atao ny manisy toeran-kafa amin'ny fitsidihana telozoro volamena. Manana fonosana izy ireo izay misy an'i Goa, Varanasi ary Kerala. Azonao atao mihitsy aza ny mamolavola ilay fonosana arakaraka ny fahafaham-ponao, ny tetibolao ary ny isan'ny olona. Betsaka ny safidy azo isafidianana ao anatin'izany ny isan'ny andro izay tadiavinao ny fitsidihanao.